🥇 aza maka salonlọ Mmanya
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 898
Video nke nnabata ego maka ụlọ ndozi mma
Nyere akaụntụ maka akaụntụ salon
Gụ ụlọ ọrụ mara mma bụ usoro ọrụ siri ike ma nwee ọtụtụ arụmọrụ pụrụ iche, nke na-adịghị mkpa n'akụkụ ndị ọzọ nke ụdị azụmaahịa a. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ime na onye isi ụlọ ọrụ ahụ na-enye usoro nyocha na mmemme mmezi nke ụlọ ndozi nke enweghị mma na-achọ iji belata ụgwọ dịka o kwere mee. N'ihi ya, ọ na-eche ihu na enweghị oge maka nhazi na nyocha nke nnukwu data data na omume nke azụmahịa, yana njikwa, ihe ndekọ na ndekọ ego, mmezi nke ọnụ ọgụgụ na ụlọ ahịa ndị ahịa, ndị ọkachamara na-arụ ọrụ njikwa , njikwa nke usoro ihe mgbagwoju anya na nke sara mbara na ego na ego na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. N'okwu a, ngwá ọrụ kachasị mma iji bulie usoro mmepụta nke ụlọ ọrụ a bụ iwebata usoro mmemme USU-Soft maka ụlọ ngosi mara mma. A na-ahụta ya ka ọ bụrụ mmemme kacha mma maka azụmaahịa azụmaahịa mara mma ma nwee ike iwepụta ihe ndekọ ego ngwa ngwa, yana ndị ọrụ yana njikwa njikwa na mma gị. Ihe ngwanrọ USU-Soft mara mma na-aza ajụjụ na-enyere gị aka ịnọgide na-edekọ ihe ndekọ na oge ya dabere na ozi a pụrụ ịdabere na ya nke usoro mmemme na-eme. Usoro USU-Soft system nke nyocha na njikwa azụmaahịa nke ụlọ mma mara mma na-egbo mkpa nke ụlọ ọrụ nke usoro azụmaahịa ọ bụla: salons mara mma, ebe a na-achọ mma, ebe a na-agba mbọ, ebe a na-egwu mmiri, ebe a na-egwu mmiri, ebe a na-akụzi anụ ụlọ, ebe a na-egbu egbu, ebe a na-asa ahụ, na ndị ọzọ. USU-Soft dị ka usoro nyocha na mmezi nke salonlọ Mmanya Mma gosipụtara ugboro ugboro na ahịa dị mma na ahịa nke Republic of Kazakhstan na mba ndị ọzọ CIS. Usoro mmemme USU-Soft bụ ihe ama ama maka ịdị mfe ya na ịdị mma nke ọrụ ya, yana ike ịhazi na nyochaa ozi gbasara nsonaazụ nke ụlọ mma gị n'oge ọ bụla. Ihe nlekọta USU-Soft Beauty salon na mmezi na-eme ka ọ dị mfe iji dịka onye isi, onye nchịkwa ma ọ bụ nna ukwu salon salon, yana onye ọrụ ọhụụ. Nsonaazụ dị oke mkpa nke ịwụnye mmemme mmemme USU-Soft bụ na ugbu a ị nyochaa nyocha niile ma mara banyere ntụzi nke ụlọ ọrụ ahụ, nke kwesịrị ka a na-achịkwa ya mgbe niile.
Akụkọ dị iche iche na-enyere aka ijikwa azụmaahịa ịma mma. Usoro mmemme na-enyere onye isi ụlọ ọrụ mara mma aka dị oke mkpa nke na-enye ya ohere ịme mkpebi nchịkwa dị mkpa. Usoro mmemme nke akpaaka na nyocha nke ihe omume salons mara mma na-enye gị enyemaka dị mkpa, na-eme ka usoro ịbanye na ịpụtapụta ngwa ngwa. Usoro nchịkwa azụmahịa na-enye ohere ka ụlọ ọrụ mara mma guzobe nyocha nke ọrụ ụlọ ọrụ mara mma, nke ga-enye ndị ọrụ ohere ịhapụ oge ha site na ọrụ na-enweghị isi. Ka anyị kọwaa nke ọma na atụmatụ na uru nke USU-Soft dị ka mmemme maka ijikwa salons mara mma (ụlọ ọrụ ịma mma, spa, spa, solarium, studio studio, wdg). Ọ bụrụ na salonlọ Mmanya mara mma gị nwere ụlọ ahịa, mgbe ahụ ị ga-ahụrịrị ụzọ ị ga - esi rụọ ọrụ na ngwaahịa na usoro nyocha maka salons mara mma. Nwere ike ịme ọnụ ọgụgụ tebụl maka ụdị nke ọ bụla na ngalaba nke ngwa ahịa, yana iji anya nke ego enwetara site na ahịa maka otu edemede site na eserese. Ihe data a gụnyere ọnụọgụ nke ihe ndị rere ere na nkeji nke ha na mkpokọta ahịa. Na ala nke otu ngwaahịa ọ bụla ị nwere ike ịhụ nsonaazụ site na otu na ngalaba edemede iche iche, yana na 'okpuru ulo' nke akụkọ tabular enwere ụkpụrụ niile maka oge niile. Dị ka ọtụtụ ndị ọzọ, a na-emepụta akụkọ a na njirimara gị na amaokwu niile akọwapụtara. Na igodo nsoro aka ekpe nke akụkọ, ị nwere ike họrọ otu Atiya ma ọ bụ subcategory na-akpaghị aka ịkwaga na ọnụ ọgụgụ. Can nwere ike ibupụ akụkọ ahụ n'onwe ya n'otu n'ime usoro elektrọnik ọgbara ọhụrụ, dịka ọmụmaatụ, iji zipu data na njikwa site na ozi. Iji mee nke a, ịnwere ike iji iwu 'Mbupụ'. Have nwere ohere ibipụta akụkọ ọ bụla. Iji mee nke a, pịa iwu 'Bipute', họrọ onye nbipute ma kọwaa ọnụ ọgụgụ nke akwụkwọ ma ọ bụ ntọala ndị ọzọ maka ibipụta.
Ihe kachasị mkpa na ọrụ nke azụmahịa ọ bụla bụ ndị mmadụ, yabụ ndị ahịa na-abịa iji nweta ọrụ ma kwụọ ụgwọ maka ya. Na-enweghị ha azụmahịa gị ga-emebi. Ndi mmadu bu ihe ndabere nke idi ndu gi. Ọ bụ ya mere ị ga-eji mee ihe niile enwere ike ka ndị ahịa wee họrọ gị. Kedu ka ị ga-esi mee nke a? Ikwesiri ibu ndi kachasi nma n’ime oru, n’uzo gi na onye ahia gi na aru oru. Ọ gaghị ekwe omume ị nweta na-enweghị teknụzụ ọgbara ọhụrụ na mmemme mmemme ọhụụ na-enye gị ohere ịkwalite ọrụ azụmaahịa gị. Ekele maka ngwanrọ anyị, ị nwere ike ichefu ruo mgbe ebighi ebi banyere ọrụ nwayọ, mmejọ ndị ọrụ na afọ ojuju ndị ahịa! Ihe ikwesiri ime bu ka iwere ihe di nkpa (zuta sistemu anyi) ma buru ahia gi n’iru ozo. Ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị na ị gaghị enwe ike ịnagide ọrụ ahụ, anyị nwere ike ịkwado gị na ụlọ ọrụ anyị na-enye nkwado teknụzụ mara mma. Anyị agaghị ahapụ gị ruo mgbe ị mụtara n'ụzọ zuru ezu otu esi eji ngwa ahụ! Otu nkwado anyị na-emetụ aka mgbe niile. Enweghị nsogbu ọ bụla ha na - enweghị ike idozi, n’ihi na ndị ọrụ anyị bụ ọkaibe mara mma.